Shayddaanka Ibliiska, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Buugga Ayuub, tixraaca malaa'igaha ayaa sheegaya inay joogeen abuuritaanka dunida oo ay ka buuxaan yaab iyo farxad (Job 38,7). Dhanka kale, Shaydaanka Job 1-2 sidoo kale wuxuu umuuqdaa inuu yahay malaa'ig, maadaama la sheegay inuu ka mid ahaa "wiilashii Ilaah". Laakiin isagu waa cadowga Ilaah iyo xaqnimadiisa.
Waxaa jira tixraacyo qaar ka mid ah "malaa'igihii dhacay" ee Kitaabka Quduuska ah (2 Butros 2,4: 6; Yuudas 4,18; Job), laakiin ma jiraan wax muhiim ah oo ku saabsan sida iyo sababta Shaydaanka u noqday cadowga Ilaah. Qorniinku nama siinin wax faahfaahin ah oo ku saabsan nolosha malaa'igaha, ama malaa'igta “wanaagsan” ama malaa'igaha dhacay (oo sidoo kale loo yaqaan jinniyo). Kitaabka Quduuska ah, gaar ahaan Axdiga Cusub, wuxuu aad u daneynayaa inuu na tuso Shaydaanka oo aan ahayn qof isku dayaya inuu carqaladeeyo ujeeddada Eebbe. Waxaa loo sheegay inuu yahay cadowga ugu weyn ee dadka Ilaahay, kaniisada Ciise Masiix.
Axdiga Hore, Shayddaanka ama Ibliiska looma magacaabin qaab caan ah. Si kastaba ha noqotee, aaminsanaanta awoodaha qumaatiga inay la dagaallamayaan Ilaah waxay ku caddahay ujeeddooyinka dhinacooda. Laba ujeeddooyinka Axdiga Hore oo matalaya Shaydaanka ama Shaydaanka ayaa ah biyaha iyo waxyaabaha firfircoon. Iyagu waa sawirro matalaya shaydaanka shaydaanka ee dhulka qabsada meeshuu ku sugan yahay oo Ilaah la dagaallamaya. Ayuub 26,12: 13 waxaan ku aragnaa sida uu Ayuub u sharraxay in Eebbe 'badda buuqsiiyay' oo "Rehab jabay". Rahab waxaa loo yaqaanaa "abeesada duuleysa" (V. 13).
Meelaha yar ee Shaydaanka lagu tilmaamay inuu yahay shaqsi ahaan Axdiga Hore, Shaydaanka waxaa lagu muujiyey inuu yahay eedeeye kaasoo doonaya inuu wax beero oo dacweeyo muran. (Sekaryaah 3,1: 2), wuxuu dadka ku kiciyaa inay ku dembaabaan Ilaah (1Chro 21,1) wuxuuna u adeegsadaa dadka iyo waxyaabaha ka dhasha inay sababaan xanuun iyo dhibaato weyn (Shaqada 1,6-19; 2,1-8).
Buugga Ayuub waxaan ku aragnaa in Shaydaanka la yimaado malaa'igaha kale si uu naftiisa ugu muujiyo Ilaah sidii isagoo loogu yeedhay golaha jannada. Waxa jira tixraacyo kale oo Baybal ah oo ku saabsan isu imaatinka jannada ee malaa'igaha oo saameeya arrimaha dadka. Mid ka mid ah kuwan, ruux beenaale ah ayaa khiyaaneeya boqorka inuu dagaal galo (1 Boqoradii 22,19: 22).
Ilaah waxaa lagu muujiyey “kii burburiyey madaxdii reer Laawi, oo siiyey xayawaanka duurjoogta ah inay cunto siiyaan” (Sabuurradii 74,14). Waa kuma leviatan? Isagu waa "bahalkii badda" - "abeeso duuleysa" iyo "abeeso jir daran" oo Rabbigu ciqaabi doono "waqtiga" marka Ilaah ka fogeeyo sharka oo dhan dhulka oo uu dhiso boqortooyadiisa (Ishacyaah 27,1).
Ujeedada Laawiyiinta sidii abeeso oo kale ayay ugu noqotaa Beer Ceeden. Halkan abeeso - «oo ka khiyaano badan xayawaanada duurka jooga» - waxay ku sasabtaa dadka inay ku dembaabaan Ilaah, taas oo keenta dhicitaankooda (Bilowgii 1: 3,1-7). Tani waxay keenaysaa wax sii sheegid kale oo dagaal mustaqbal ah oo dhexmara isaga iyo abeesada, oo abeesadu u muuqato inay ku guuleysato dagaal muhiim ah (xasilooni ciribta ilaahay), kaliya markaa markaa dagaalka ha lumin (madaxiisa waa la burburin doonaa). Waxsii sheegiddan Ilaah wuxuu abeesadii ku yidhi: "Anigu colaad baan idin dhex dhigi doonaa adiga iyo naagta, iyo inta u dhexaysa farcankaaga iyo farcankeeda; oo madaxaaguu burburin doonaa, adiguna cedhibbahaad isaga qaban doontaa » (Bilowgii 1:3,15).
Macnaha guud ee bayaankan waxaa lagu fahmi karaa iftiinka abuur ahaantii Wiilka Ilaah sida Ciise reer Naasared (Yooxanaa 1,1). Waxaan ka aragnaa Injiillada in Shaydaanku isku dayo inuu hal wado ama si kale u burburiyo Ciise laga bilaabo maalinta dhalashadiisa ilaa dhimashadiisa iskutallaabta. In kastoo Shaydaanka uu ku guuleystey dilkii Ciise isagoo adeegsanaya wakiilkiisii ​​aadanaha, ibliiskii ayaa dagaalka ku lumiya dhimashadiisa iyo sarakicistiisa.
Nach Jesu Himmelfahrt, geht der kosmische Kampf zwischen der Braut Christi – dem Volk Gottes – und dem Teufel und seinen Lakaien weiter. Aber Gottes Vorhaben siegen und bleiben bestehen. Am Ende wird Jesus zurückkehren und die geistliche Opposition gegen ihn vernichten (1 Korintos 15,24: 28).
Markuu dagaalku dhammaado, sheydaanka ama shaydaanku waxay ku xidhn yihiin yaamayska, iyagoo ka horjoogsanaya inuu "adduunka oo dhan khiyaaneeyo" sidii uu hore u yeelay (Rooma 12,9).
Am Ende sehen wir, dass das Reich Gottes über alles Böse triumphiert. Es wird durch eine ideale Stadt bildlich dargestellt – die heilige Stadt, das Jerusalem Gottes –, wo Gott und das Lamm zusammen mit ihrem Volk in ewigem Frieden und ewiger Freude wohnen, was durch die gegenseitige Freude, die sie teilen, ermöglicht wird (Muujintii 21,15: 27). Shaydaanka iyo awoodaha sharka oo dhan waa la baabi'iyey (Muujintii 20,10).
Ciise wuxuu ugu yeedhay Shaydaan iyo jinniyo dhicisoobay "Ibliis iyo malaa'igihiisii" oo loo diyaariyay "dabka weligiis ah" (Matayos 25,41). Waxaan ka aqrinaynaa Injiillada in jinniyo ay yihiin sababaha cudurada jirka iyo jirro kaladuwan. Xaaladaha qaarkood, jinniyo ayaa ku haystay maskaxda dadka iyo / ama jirkooda, taas oo markii dambe u horseedday daciifnimo sida nabarro, carrab la ', indho la'aan, naafo qayb ah iyo noocyo waali ah.
Luukos wuxuu ka hadlayaa haweeney Ciise la kulantay sunagogyada, "oo qabay ruux siddeed iyo toban sano jir ah oo xanuunsatay" (Luukos 13,11). Ciise wuu ka daayay cudurkeeda oo waxaa lagu dhaleeceeyay inuu bogsado sabtidi. Ciise wuxuu ugu jawaabay: "Miyaanay ahayn haddaba gabadha Ibraahim oo Shayddaan siddeed iyo toban sannadood xidhay inay xidhnaato, oo xukunkan ha laga furo maalinta sabtida?" (V. 16).
Xaaladaha kale, wuxuu daaha ka qaaday jinniyo sababi kara xanuuno, sida kiiska wiil qabay xanuun daran oo la qabatimay dayaxa tan iyo caruurnimadiisii (Matayos 17,14: 19-9,14; Markos 29: 9,37-45; Luukos). Ciise wuxuu si fudud u amri karaa jinniyadaas inay ka tagaan kuwa buka oo addeecaan. Markuu sidaa yeelay, Ciise wuxuu muujiyey inuu leeyahay amar buuxda oo ku saabsan dunida Shaydaanka iyo jinniyada. Ciise ayaa xertiisii ​​isla amar ku siiyey jinniyada (Matayos 10,1).
Rasuul Butros wuxuu ka hadlay adeegga bogsashada ee Ciise inuu yahay kan dadka ka xoreeyay cudurada iyo cudurada Shaydaanka iyo jinniyadiisa xunxun ay iyagu ahaayeen kuwa toos ah ama aan toos ahayn. Waad ogtahay wixii Yahuudiya ka dhacay oo dhan ... siduu Ilaah Ciisaha reer Naasared ku subkay Ruuxa Quduuska ah iyo xoog; Isagu waa wareegi jiray oo wanaag buu sameeyey, oo wuu bogsaday kuwa xoogga Shayddaanka jooga oo dhan, maxaa yeelay, Ilaah baa la jiray isaga. (Falimaha Rasuullada 10,37: 38). Aragtidan ku saabsan shaqada Ciise ee bogsashada waxay muujineysaa aaminsanaanta shaydaanka inuu yahay cadowga Ilaahay iyo abuurkiisa, qaasatan aadanaha.
«Dembile koowaad». Ibliisku wuxuu dembaabayaa bilowga » (1 Yooxanaa 3,8). Ciise wuxuu Shayddaanka ugu yeeraa "Amiir jinniyo" - taliyihii malaa'igihii dhacay (Matayos 25,41). Ciise wuxuu ku jabiyay saameynta Ibliisku ku leeyahay dunida shaqadiisa badbaadadiisa. Shaydaanku waa "kan xoogga" gurigiisa ku jira (adduunka) Ciise wuu galay (Mark 3,27). Ciisena wuxuu "ku xidhxidhay" kan xoogga lahaa oo "u qaybiyey dhaca" "wuxuu kaxaystaa alaabtiisa, boqortooyadiisa].
Taasi waa sababta Ciise u yimid jidhka. Yooxanaa wuxuu qoraa: «Wiilka Ilaah wuxuu u muuqday inuu baabi'iyo shuqullada Ibliis» (1 Yooxanaa 3,8). Warqadda Kolosaylos waxay ka hadlaysaa shaqadan burbursan iyadoo la adeegsanayo ereyo iswada: “Wuxuu xayuubiyey awoodihii iyo awoodoodii awoodiisa wuxuuna si cad u soo bandhigay oo ka dhigay inay ku guuleystaan ​​Masiixa” (Kolosay 2,15).
Warqaddii Cibraaniyadu waxay si faahfaahsan uga hadlaysaa siduu Ciise tan u gaadhay: “Maxaa yeelay carruurtu haatan waa hilib iyo dhiig, isaguna sidaas oo kaluu u aqbalay si uu dhimashadiisa ugulakaco kuwa xukuma dhimashada, kan ah Ibliis, Oo wuxuu furtay kuwii noloshooda noloshooda ku dhaaranayay iyagoo cabsanaya dhimashada. (Cibraaniyada 2,14: 15).
La yaab maahan, Shaydaanka wuxuu isku dayaa inuu burburiyo ujeeddada Ilaah ee wiilkiisa, Ciise Masiix. Hadafka Shaydaanka wuxuu ahaa inuu dilo erayga jidh ahaaneed, Ciise, markuu dhallaanka ahaa (Muujintii 12,3: 2,1; Matayos 18) si loogu tijaabiyo isaga noloshiisa oo dhan (Luukos 4,1: 13), iyo in la xidho oo la dilo (V. 13; Luukos 22,3: 6).
Iyada oo loo marayo qofka Ciise iyo shaqadiisa badbaadada, qorshooyinka Ibliis ayaa dib loo beddelay oo laga adkaaday. Markaa, Masiixu wuxuu mar horeba shaydaanka ka adkaaday noloshiisa, dhimashadiisa, iyo sarakicistiisa isagoo shaaca ka qaaday ceebta sharka. Habeenki uu khiyaanay, Ciise wuxuu xertiisii ​​u sheegay: "inaan aabaha u tago ... Amiirka dunidan hadda ayaa la xukumay" (Yooxanaa 16,11).
Markuu Masiixu soo noqdo, saamaynta shaydaanka ee adduunka ayaa joogsan doonta oo guuldarradiisa dhammaystiranna way caddayn doontaa. Guushaani waxay ku dhici doontaa isbadal la taaban karo oo rasmi ah dhamaadka da'daan (Matayos 13,37: 42).
Intii lagu gudajiray wasaaradiisa dhulka, Ciise wuxuu cadeeyay in "Amiirka dunidan la eryi doono" (Yooxanaa 12,31), oo wuxuu yidhi amiirkan "awood uma lihi" isaga (Yooxanaa 14,30). Ciise wuu ka adkaaday Shaydaanka maxaa yeelay Ibliisku ma xakamayn karin. Ma jiro jirrabaab uu Shayddaan ku tuuray Ciise oo ahaa mid ku adkaan kara inuu ka leexiyo jacaylka uu u qabo iyo aaminaadda Eebbe (Matayos 4,1: 11). Wuxuu ka adkaaday Ibliis oo wuxuu xaday alaabtii "xoogga" - Dunida uu haystay (Matayos 12,24: 29). Masiixiyiin ahaan, waxaan rumeysan karnaa guushii Ciise ka qaaday cadaawayaashii Ilaah oo dhan (iyo cadaawayaasheenna), oo ay ku jiraan Ibliiska, nasashada.
Laakiin Kaniisaddu waxay ku jirtaa xiisadda "horeba way u jirtay, laakiin ma aha wali", taas oo Ilaah sii wado inuu u oggolaado Shaydaanka inuu ku sasabto dunida oo uu ku faafo burburka iyo dhimashada. Masiixiyiintu waxay ku nool yihiin inta u dhexeysa "Waa la dhammaystiray" dhimashada Ciise (Yooxanaa 19,30) iyo “Waxay ku dhacday” burburka ugu dambeeya ee xumaanta iyo imaatinka boqortooyada Ilaah ee dhulka (Muujintii 21,6). Shaydaanka wali waa loo ogol yahay inuu ka masayro awooda injiilka. Ibliiskuna weli waa amiirka aan la arki karin ee gudcurka, oo idanka Eebbe ku leeyahay wuxuu leeyahay awood uu ku dhammaystiro ujeeddadiisa.
Axdiga Cusubi wuxuu inoo sheegayaa in Shaydaanka uu yahay kan xukunta adduunka sharka leh iyo in dadku iyagoo aan ogayn ay isaga u raacaan isaga oo ka hor imanaya Ilaah. (Giriig ahaan, ereyga "amiir" ama "amiir" [sida loogu adeegsaday John 12,31] waa tarjumaad ereyga Griig archon, oo tilmaamaysa saraakiisha ugu sareysa dowladda ee degmo siyaasadeed ama degmo).
Rasuul Bawlos wuxuu sharxayaa in Shayddaanku yahay “Ilaaha dunidan” oo "indho beelay maanka kuwa aan rumaysanaynin" (2 Korintos 4,4). Bawlos wuxuu fahmay in Shaydaanku xitaa xannibi karo shaqada Kaniisadda (2 Tesaloniika 2,17: 19).
Kaniisadda ayaa looga digayaa inay ka taxaddarto aaladda Shayddaanka. Hogaamiyaasha Masiixiyiinta, Bawlos wuxuu leeyahay, waa inay ku noolaadaan nolol u qalma baaqa Ilaah ee ha "ku qabsanin shaydaanka shaydaan" (1 Timoteyos 3,7). Masiixiyiintu waa inay iska ilaaliyaan khiyaanooyinka shaydaanka waana inay haystaan ​​hubka Ilaah "ka dhanka ah jinniyada sharka ah ee jannada ka jirta" (Efesos 6,10: 12). Waa inay sidan sameeyaan si "aysan u khiyaanayn shaydaan" (2 Korintos 2,11).
Shaydaanka wuxuu abuuraa indho la’aan xagga ruuxiga ah xagga runta ah ee Masiix ee siyaabo kala duwan. Caqiidooyinka beenta ah iyo fikradaha kala duwan "ee ay jinniyada wax ku baray" waxay dadka u horseedaan "inay raacaan jinniyo khiyaano leh" inkasta oo aysan ka warqabin isha ugu dambeysa ee sasabashada. (1 Timoteyos 4,1: 5). Markii la indho tiro, dadku awoodin inay fahmaan iftiinka injiilka, kaas oo ah warka wanaagsan ee Masiixu inaga badbaadiyo dembiga iyo dhimashada. (1 Yooxanaa 4,1: 2-2; 7 Yooxanaa). Shayddaanku waa cadowga ugu weyn ee injiilka, "kan sharka leh" ee iskudaya inuu khaa'imiyo dadka si ay u diidaan injiilka (Matayos 13,18: 23).
Shaydaanka maahan inuu isku dayo inuu shaqsi ahaan kuu sasabo. Waxay ku shaqeyn kartaa dadka faafiya falsafad been ah iyo fikradaha fiqi ahaaneed. Dadku sidoo kale waxay ku noqon karaan addoonsiga qaab-dhismeedka sharka iyo marin-habaabinta ku dhex jira bulshada dhexdeeda. Shaydaanka wuxuu kaloo adeegsan karaa dabeecadeena bini aadamka ee naga soo horjeedda, si dadku ay u aaminaan inay leeyihiin "runta" markay runtiina ka tanaasulaan waxa Eebbe ka yimid kana yimid dunida iyo sheydaanka. Dadka noocaas ah waxay aamminsan yihiin in nidaamkooda caqiido ee qaldan ay badbaadin doonaan (2 Tesaloniika 2,9: 10), laakiin waxa ay dhab ahaantii sameeyeen waa inay "khaldeen runta Ilaah" (Rooma 1,25). “Beentu” waxay u muuqataa wax wanaagsan oo run ah maxaa yeelay Shaydaanku naftiisa iyo nidaamkiisa aaminsanaanta ayuu u soo bandhigayaa qaab waxbaristiisa oo kale ay tahay sida run ka timid “malaa'igta iftiinka” (2 Korintos 11,14) hawlo.
Guud ahaan hadalka, Shaydaanka ayaa ka danbeeya jirrabaadda iyo damaca dabeecaddeenna dhacday si ay u dembaabaan, oo sidaas daraaddeed isagu wuxuu noqday "tijaabiyaha" (2 Tesaloniika 3,5; 1 Korintos 6,5; Falimaha 5,3). Bawlos wuxuu hoggaamiyaa kaniisadda Korintos dib ugu noqoshada Bilowgii 1 iyo sheekada Beerta Ceeden inuu uga digo inaysan ka leexan Masiixa, waa sheydaanka isku dayay inuu sameeyo. "Laakiin waxaan ka baqayaa in sida abeesadu abeeso Xaawa ugu khiyaanayso sasabashadeeda, sidaa darteed fikradahaaga way ka leexan doonaan fududnaanta iyo daacadnimada Masiixa" (2 Korintos 11,3).
Tan macnaheedu maahan in Bawlos uu rumeysan yahay in Shaydaanka shaqsi ahaantiisa isku dayay oo si shakhsi ah u khiyaaneeyey. Dadka rumeysan “Ibliis ayaa iga dhigay sidaas” markasta oo ay dembaabaan ma oga in Shaydaanku uu adeegsanayo nidaamka sharkuu ku abuuray dunida iyo dabeecadda dhacday ee inaga geesta ah. Marka laga hadlayo Masiixiyiinta Tesaloniika ee kor ku xusan, khiyaanadan waxaa lagu fulin karaa macallimiin ku beeray abuurka nacaybka Bawlos iyagoo dadka ka dhigaya inay rumaystaan ​​inuu isagu [Bawlos] uu khiyaanaynaayo ama qarinayo hunguri ama ujeeddo kale oo xun. (2 Tesaloniika 2,3: 12). Si kastaba ha noqotee, maadaama Ibliisku abuuray faaqidaad isla markaana uu adduunka ku maamulo, tijaabiyaha ayaa ugu dambeyntii ka dambeeya dhammaan dadka beero abuurka iyo nacaybka.
Sida uu sheegayo Paul, Masiixiyiinta ka soocay bulshada ee Kaniisadda dembiga ayaa dhab ahaantii "loo bixiyay Shayddaanka" (1 Korintos 5,5; 1 Timoteyos 1,20), ama “jeedsaday oo Shayddaanka raac” (1 Timoteyos 5,15). Butros wuxuu adkaynay idihiisa: «Digtoonaada oo feejignow; maxaa yeelay cadowgaaga, Ibliiska ayaa wuxuu ku socdaayaa sidii libaax ciyaya oo kale, wuxuuna raadiyaa cidda uu cuno (1 Butros 5,8). Jidka loo adkeysto Shayddaanka, ayaa yidhi Peter, in la "iska caabudo" (V. 9).
Sidee dadku u adkeystaan ​​Shaydaanka? Yacquub wuxuu sharxayaa: «Marka haddaba Ilaah u adeeca. Shayddaanka iska caabiya, wuu idinka carari doonaaye. Haddaad u soo dhowaato Ilaah, isna wuu kuu soo dhowaan doonaa. Dembilayaashow, gacmihiinna nadiifiya, oo qalbiyadiinna daahiri, Dadka qalloocan » (Yacquub 4,7-8). Waxaan u dhow nahay Ilaah markii qalbigeennu yeesho dabeecad cibaado leh farxad, nabad iyo mahadnaq kan ku koray ruuxiisa jacaylka iyo iimaanka.
Dadka aan Masiixa aqoon oo aan Ruuxiisu hagayn (Rooma 8,5-17) «ku noolaada hilibka kadib» (V. 5). Waxay la jaan qaadayaan adduunka oo ay la socdaan "ruuxa ka shaqeeya carruurta caasinimada waqtigaas" (Efesos 2,2). Ruuxan, oo lagu aqoonsaday meel kale oo aan ahayn sheydaanka ama Shaydaanka, wuxuu dadka u adeegsadaa si ay uga taxaddaaraan inay sameeyaan "damacyada jidhka iyo caqliga" (V. 3). Laakiin nimcada Eebbe, waxaan ku arki karnaa iftiinka runta ee ku jira Masiixa oo aan ku raacno iyada oo loo maro Ruuxa Ilaah halkii aan si kaamil ah u hoos gelin lahayn shaydaanka, adduunka dhicisoobay, iyo dabeecaddeenna daciifka ah iyo dembiga aadanaha.
“Dunida oo dhami way dhibaataysan tahay” oo ka hoosaysa xukunka Ibliiska] John ayaa qoray (1 Yooxanaa 5,19). Laakiin kuwa carruurta Ilaah iyo kuwa raacsan Masiixa ayaa la siiyay fahamka inay "ogaadaan kuwa runta leh" (V. 20).
Marka tan la eego, Muujintii 12,7: 9 waa mid aad u layaab badan. Qisada dagaal ee Muujintii, buuggu wuxuu muujinayaa dagaal dagaal oo u dhexeeya Michael iyo malaa'igtiisa iyo masduulaagii (Shayddaanka) iyo malaa'igtiisii ​​dhacday. Ibliis iyo dameerkiisana waa la jabiyey oo "meelahoodu mar dambe samada lagama helin" (V. 8). Natiijadii? "Oo masduulaagii weynaa, oo abeeso duug ah, oo la yiraahdo Ibliiska iyo Shayddaanka, oo dunida oo dhan sasabaya ayaa lagu tuuray, oo waxaa lagu tuuray dhulka; oo malaa'igihiisiina halkaas lagu tuuray isaga" (V. 9). Fikradda ayaa ah in Shayddaanku sii wado dagaalka uu kula jiro Ilaah isagoo silcinaaya dadka Ilaah ee dunida jooga.
Goobta dagaalka ee u dhexeeya xumaanta (waxaa faray shaydaanka) iyo wanaagga (oo uu hogaaminayo Ilaah) natiijooyinka dagaalka u dhexeeya Baabuloontii weynayd (aduunka oo ay ka taliyaan sheydaanka) iyo Qudus cusub (dadka Ilaah in Ilaah iyo Wankuna raacaan Ciise Masiix). Waa dagaal loogu talagalay inuu Ilaah ku guuleysto maxaa yeelay waxba kama adkaan karto ujeedkiisa.
Am Ende werden alle Feinde Gottes, Satan eingeschlossen, besiegt. Das Reich Gottes – eine neue Weltordnung – kommt auf die Erde, symbolisiert vom neuen Jerusalem im Buch der Offenbarung. Der Teufel wird aus der Gegenwart Gottes entfernt und sein Reich wird mit ihm ausgelöscht (Muujintii 20,10) oo lagu beddelay xukunka weligiis ah ee jacaylka Ilaah.
Waxaan akhrinaa ereyadan dhiirrigelinta ah ee ku saabsan "dhammaadka" wax walba: "Oo waxaan maqlay cod weyn oo carshiga ka dhashay, Bal eeg, rugta Ilaah ee dadka dhex taal! He dwell dwell will dwell Isagaa la jiri doona, oo iyaguna dad bay ahaan doonaan, oo isagu Ilaah baa la jira iyaga, Ilaahooduu u ahaan doonaa, oo Ilaahna indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa, oo dhimashaduna mar dambe ma jiri doonto, oo dhib dambena ma jiri doono, oo qaylo iyo xanuun midna yeeli mayso. maxaa yeelay kii hore wuu dhaafay. Markaasaa kii carshiga ku fadhiyey wuxuu yidhi, Bal eeg, wax kastaba cusayb baan ka dhigayaa. Oo wuxuu igu yidhi, Qor, waayo, erayadanu waa run iyo run. (Muujintii 21,3: 5).